Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Gobalka Hiiraan Lagu Weeraray. – Bogga Calamada.com
Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Gobalka Hiiraan Lagu Weeraray.
June 29, 2016 9:30 am Views: 8
Wararka ka imaanaya gobalka Hiiraan ayaa sheegaya in aroornimadii hore ee saaka ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay weerar culus ku qaadeen isbaaro maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ay dhigteen duleedka degmada Ceelcali ee gobalka Hiiraan.
Deegaanka saaka lagu weeraray maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ayaa lagu mmagacaabaa Ceeldheer waa deegaan dhanka Waqooyi ka xiga degmada Ceelcali ee gobalka Hiiraan oo ah degmo ay duulaan ku joogaan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya.
Deegaanka dagaalka uu ka dhacay waa deegaan isbaaro weyn ay u taala maleeshiyaatka Ridada’iyadoona ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin si gaar ah ay u beegsadeen goobta isbaarada.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in tiro ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaalka’waxaa tirada dhaawacantay ku jira taliyaha isbaarada dowlada ee degaanka Ceeldheer kaasi oo magaciisa lagu soo gaabiyay Gunri.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa la wareegay deegaanka’iyagoona sidoo kale gacanta ku dhigay Qaniimo ka kooban qori AK47 iyo agab kale oo ay la haayeen maleeshiyaatka Murtadiinta ee laga saaray deegaankaasi.